Kodiarana vy malefaka vy AWS E6011
Malemy vy vy Welding elektroda
Stainless vy Welding elektroda
Atsofohy vy vy vy
Vaovao momba ny varotra
Kodiarana vy malefaka vy AWS E6013 J421
Stainless vy Welding elektroda AWS E309L-16 （A062）
Kodiarana vy malefaka vy AWS E7018
Z408 Nickel Cast Iron Electrode AWS ENiFe-CI
E71T-GS— tariby fanamafisam-peo mihodina
Steel malefaka mikraoba vy AWS E6010
Vovoka welding: E6013
Izy io dia mety amin'ny fametahana ny firafitry ny vy ambany karbaona toy ny fantsom-panafody, fanamboarana sambo ary tetezana sns.
Min.Order Quantity: 1 taonina
Fahaizana manome: 2000 taonina isam-bolana
Sample maimaim-poana: Available
Fonosana manokana: tonga soa
E6011 dia elektroda karazana potasioma-cellulosic. Azo atsofoka amin'ny toerana rehetra (indrindra ho an'ny toerana avo-midina) miaraka amin'ny AC sy DC +. Izy io dia manana fahombiazana tsara toy ny arc azo antoka, spatter kely, fanesorana ny slag mora ary fahaiza-manjaka sns. Manana tombony ihany koa ny fifehezana pisinina molten tsara kokoa, ny hery arc mahery ary ny fidirana lalina kokoa amin'ny toerana mitsangana.
1. Amin'ny ankapobeny, tsy mila maina ny electrode alohan'ny welding. Rehefa voan'ny hamandoana izy io dia tokony ho maina indray amin'ny 70 ℃ -90 ℃ mandritra ny adiny 1.
2. Ny harafesina, solika, rano ary loto hafa amin'ny faritra las dia tsy maintsy esorina alohan'ny fikajiana.
Fikarohana lesoka amin'ny tara-pahazavana: Ⅱ haavo
FAMBORIANA DEPOSIT (Score kalitao):%
Manome tanjakaRel / Rp0.2 MPa
PROCEDURES OPERATING TYPICAL: (AC, DC +)
5kgs / boaty, boaty 4 / baoritra, 20kgs / baoritra, 50 cartes / pallet. 21-26MT isaky ny 1X20 ″ FCL.
Manohana OEM / ODM izahay ary afaka manao fonosana mifanaraka amin'ny volavolanao, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny adihevitra amin'ny antsipiriany.
Shijiazhuang Tianqiao Welding Materials Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2007. Amin'ny maha mpanamboatra electrode welding mahery vaika antsika, manana hery ara-teknika matanjaka izahay, fitaovana fitiliana vokatra feno mba hahafahanay mitazona ny kalitaon'ny vokatra azo antoka. Ny vokatray dia misy karazana electrode welding miaraka amin'ny marika "Yuanqiao", "Changshan", toy ny vy ambany karbaona, vy vy Iow alIoy, vy mahazaka hafanana, vy maripana ambany, vy tsy misy fangarony, vy vy, elektrônika fantsom-pifaneraserana ary isan-karazany vovoka mifangaro mifangaro.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny toekarena nasionaly isan-karazany, toy ny milina, metallurgy, indostria simika solika, boiler, sambo fanerena, sambo, tranobe, tetezana, sns., Amidy eraky ny firenena ny vokatra, ary tsara voarain'ireo mpampiasa midadasika. Ny vokatray dia manana fahombiazana tena tsara, kalitao miorina, famolavolana fantsom-boho kanto, ary fanesorana ny silaka tsara, fahaiza-manao tsara hanoherana ny harafesina, Stomata sy triatra, fampisehoana mekanika metaly tsara sy milamina. Ny vokatray dia zato isan-jato noondrana ary efa namidy eran'izao tontolo izao, indrindra any Etazonia, Eropa, Amerika atsimo, aostralia, afrika, afovoany atsinanana, atsimo atsinanana ary sns.. vidin'ny fifaninanana.
Teo aloha: E71T-GS— tariby fanamafisam-peo mihodina
Manaraka: Z408 Nickel Cast Iron Electrode AWS ENiFe-CI
Carbon vy welding vy
Duplex elektrika vy vy
Vy elektrika vy vy
Steel vy welding
Ny electrodes welding amin'ny arc AWS E7024
Kodiarana vy malefaka vy J422 E4303
Électrode welding J506 E7016 ho an'ny vy ambany firaka
Electrode welding vy malemy paosy E6013
Adiresy: Tanàna Nanzuo, County Yuanshi, Shijiazhuang, Hebei, Sina.
Ahoana no anaovana ny electrode welding?
Ny fisafidianana sy fanomanana ny tungsten ...
Inona no atao hoe welding?
© Copyright - 2019 -2021: Voatahiry ny Zo rehetra.
Atsofohy vy vy vy, Ss Welding Electrode, Tsorakazo vy tsy mitovy, Kavina vy 1.5 Mm, electrode welding, vy vy,